Dambiile Ina Dhuubo oo u Tahriibay Xagga Qaaxo – Rasaasa News
Dambiile Ina Dhuubo oo u Tahriibay Xagga Qaaxo
Sep 8, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilada
Shimbir garab li,i wax ma garatee, waan gabooboo geedna waayee, Jwxo-shiil baa i go,odoonshoo i guhaadshee waan gagabyoo meel aan galo iyo geedba waayee garbaha i qabo bal xaga u guda oo Qaaxo ii gee…
Ina Dhuubo Af Dhiin, oo muddo dheer ka dhar dhaqayey dalka Denmark, ayaa waxaa u suurto gashay in loo tahriibiyo cariga uu joogo Mr. Qaaxo, oo isaga laftigiisa ay 1992dii u tahriibiyeen xubno sare oo ka tirsanaa ururka ONLF. Mr Qaaxo oo muddo aad u dheer ku dabranaa dalka Jarmalka, ka dib kolkii dalka Jarmalku u diiday in uu siiyo wax sharci ah, halkaas oo muddo 8 sano ah uu ku noolaa warqado uu raashin ku iibsado iyo qaaraan ay siiso Jaaliyada Somalida Ogadeeniya ee dalka Jarmalka.
Waxaa sanadkii 1992kii, uu gudoomiyihii ururka Ogaden Releive Australia [ORA] Hassan Omar [Hassan Qoryooley] iyo Dr. Dolal ay si wada jir ah ugu soo dhameeyeen Arji qaxootinimo oo ay ka codsadeen dalka Australia in Mr. Qaaxo iyo qoyskiisa la siiyo. Halkaas oo uu maanta ku nool yahay, balse aynu ognahay waxa uu ugu dambariyey dadkii geeyey dalka uu maanta degan yahay.
Sida ay wararku sheegayaan waxaa eeggana soo yeedhaysa in Ina Dhuubo Af Dhiin, oo muddo ku dhibaataysnaa dalka Denmark ay u suurto gashay in uu ku tahriibo Passport la sheegay in uu u soo diray nin hore uga tirsanaa Jabhada Somali Galbeed, hadase u xuub siibtay kooxda Qaaxo [reer Cabdile]. Ina Dhuubo Af Dhiin ayaa waxaa uu ku go,odoonsanaa dalka Denmark muddo halkaas oo uu ku xidhnaa qol, uu bariyihii dambe kula qayili jiray Cabdi Ganaf [xubin baarlamaanka Kaalinka 5aad ah] iyo qaar kale oo masuuliin Kaalinka 5aad ah. Jaaliyada Somalida Ogadeeniya ayaa iska fogaysay Ina Dhuubo Af Dhiin, ka dib kolkii ay ogaadeen in uu galay dambiyo ka dhan ah dadweynaha iyo halganka, waxaana uu 9 bilood ee ugu dambayey Doobi ka ahaa warshad dharka dhaqada oo ku taalo dhanka koonfureed ee magaalada Copenhagen.
Ina Dhuub Af Dhiin, waxaa saaraa culays aad u badan oo kaga imanayey bulshada Somalida Ogadeeniya, in kasta oo ayna gaadhin waxyeelo jidheed, waxaa soo foodsaartay xanuun maskaxeed oo xoog leh. Waxaana uu ku kali noqday dhibaato badan oo kaga imanaysay dhinaca reerkiisa iyo mid kale oo kaga imanaysay dhinaca Jwxo-shiilo iyo kuwa ku taageera beesha.
Jwxo-shiil, ayaa waxaa haysata dhibaato badan oo tirtirtay taariikhdiisa dhigtayna meel madow oo cidla ciirsila ah, [qabiil ku jabhad] waxaana lugaha loo galiyey dambiyo uusan galeen hadii uusan dhagaysan lahayn kooxda Qaaxo. Jwxo-shiil ayaa waxaa laga soo sheegayaa in uu hadh iyo habeenba ku riyoodo isaga oo leh godka waxaa i galiyey labda nin Ina Dhuubo Af Dhiin iyo Mr. Qaaxo, waxaan moodayey in ay yihiin dad wax tar leh waxaanan lahaa aad iskaga tiirsataan tiirkii naga cuslaa ee aan ururka ka wada shaqayn jiray, balse hadii aan moodayo in ay sidan u awood daran yihiin marna kama raaceen ninka isaga oo moodan aduunka igu cadaabay.
Jwxo-shiil waxaa uu hadal cad telefoon ugu sheegay Ina Dhuubo Af Dhiin in uu dhiiqo colaadeed oo uusan ogayn ay lugaha dalaq u siiyeen isaga iyo Mr Qaaxo, sidaas daraadeed hadalkaaga iyo horjoogaaga midna ma doonayo aniga kii tagay iyo idinku isku mid baad ii tihiin cid dambe oo aan aaminayaana ma jirto.
Hadladaas Jwxo-shiil, ayaa waxay abuureen in Ina Dhuubo Af Dhiin uu iskaga tahriibo dalalka reer Yurub miciina u doonto Qaarada Australia. halkaas oo sida la filayo uu la guri gali doono garoob reer koonfureed ah, oo siin doonta degaan iyo sharci.